मध्यरातमा सरकार र डा. केसीबीच सहमति, आज अनशनरत तोड्दै
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजमध्यरातमा सरकार र डा. केसीबीच सहमति, आज अनशनरत तोड्दै
विराटनगर, २५ असोज । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच मध्यरातमा ८ बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार २८ दिनदेखि अनशनरत डाक्टर केसीले आइतबार (आज) बिहान साढे ९ बजे अनशन तोड्दै छन् । बुधबार सरकार र डाक्टर केसी पक्षले वार्ता टोली गठन गरे लगत्तै बिहीबार र शुक्रबार भएको वार्ता असफल भएको थियो । शनिबार सरकारी वार्ता टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग छलफल गरेपछि सहमति जुटेको हो ।
डा. केसी ६ बुँदे माग राखेर भदौ २९ गते जुम्लाको एक धर्मशालाबाट १९ औं अनशन सुरु गरेका केसीलाई असोज ५ गते नेपालगञ्ज ल्याइएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको भन्दै नेपालगञ्जबाट हेलिकप्टरमा असोज ६ गते काठमाडौं ल्याइएपछि उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत थिए ।
सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमति ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकारमा डा. केसीबीच २०७५ साउन १०लाई पनि राख्ने सहमतिमा उल्लेख छ । आजका पत्रपत्रिका समाचार छ । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको हो ।
अनशन डा. केसी सहमति